Su'aal: Maxaa keeno Waji Saliida? Maxaa lagu daaweeyaa?
Author Topic: Su'aal: Maxaa keeno Waji Saliida? Maxaa lagu daaweeyaa? (Read 57541 times)
« on: January 21, 2016, 09:27:38 PM »
Asc all muslims waxan ubaahnaa in wax la iiga sheego waxyaabaha keena weji saliida iyo wax yaabaha lagu daaweeyo
Re: Su'aal: Maxaa keeno Waji Saliida? Maxaa lagu daaweeyaa?
« Reply #1 on: February 16, 2016, 10:07:14 PM »
Waa maxay waji saliidka?
Wajiga saliida leh dad badan ayaa ka sheegto, khaasatan markii qofka wajiga ku yeesho findoob ama haaro.
Eebe wuxuu oogada biniaadanka ku abuuray qanjirro howshoodu ay tahay inay soo daayaan saliid si ay u subkaan maqaarka kore, loogana hortago kor qallaylka.
Qanjirradaas oo loo yaqaano "Sebaceous glands", saliida ay soo saaraane waxaa loo yaqaanaa "Sebum", hadii qanjirradaasi si saa'id ah u shaqeeyaan qofka wuxuu yeesha maqaar saliiddu ku badan tahay khaas ahaan wajiga.
Maxaa keeno Waji Saliidka?
Dhaxal: dadka ugu badan waxay arrintaan ugu dhacdaa dhaxal ahaan, kuwaasoo ku dhasho qanjir saliid firfircoon.
Welwelka: wuxuu kiciyaa qanjirrada saliida.
Isbadallada hormoonka: waxay keentaa in saliid soo saarista qanjirrada ay badato ama wajiga ay ka soo yaacaan finan, waxaana xaaladaan la dareemaa xilliga caadada, kadibne way baaba'daa.
Safarka: qofka galo safarrada badan, una kala goosho wadamo kala duwan cimilladooda waxay keentaa in maqaarkiisu uu saliida ku bato.
Daawooyinka la isku qurxiyo, qaar badan oo ka mid ah waxay keenaan waji saliid.
Daawada looga hortago uurka, waxay keenaan waji saliidka
Nafaqo darrida, waxay keentaa waji saliidka.
Hawada sumaysan ama magaalooyinka ay warshadaha ku badan yihiin dadka ku nool waxay u bataan waji ku saliidlayaal.
Maxay dhibaato ah ayuu keenaa waji saliidka?
Dhibaatada ugu badan waa in wajiga uu yeesho nabro ama haaro kuwaas oo si dhakhso ah u faafi karo, akhriso qoraal aan kaga hadalnay findoobka: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,2102.0.html
Sidee looga hortagaa waji saliidka? ama lagu yareeyaa?
Jooji waji dhaqista badan: tan waa qaladka ugu horreeyo oo lagu dhaco, dadku waxay aaminsan yihin hadduu qofka uu wajiga dhaqo in badan in saliiddu ay yaraanayso, waa caksi, saliidda waa sii badataan, marka waxaa wajigaaga dhaqdaa labo jeer kaliya, markaa soo kacdid iyo markaa seexanayso, taasoo dareensiinayso qanjirka saliidda in baahi wayn aysan jirin.
Ku dhaq wajigaaga biyo diirran: qaladka labaad waa in wajigaaga aad ku dhaqdaa biyo kulul ama qabow, taasoo labadoodaba wajiga qallajiya, hadduu qalleel yimaadane saliidu waa imaanaysaa.
Haddii aad wajigaaga saliid ka dareento, ku tirtir maro khafiif ah oo jilcan oo wajigaaga aanan dhaawacaynin aad u qallajinaynin
Cabitaanka badso: cabitaanka badan waxuu jirka ka ilaaliyaa qallaylka, wuxuuna hoos u dhigaa shaqada qanjirrada saliidda soo saaro, ogow haddii biyo cabitaankaagu uu yar yahay, saliida way jiraysaa. Akhriso faa'idooyinka caafimaad ee laga dhaxlo biyo cabista badan: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5971.0.html
Yarey sonkorta, cusbada, dufanka iyo cunnada shiilan: kullamaa cuntada aad cunayso ay caafimaad leedahay, kullamaa shaqada jirkaagu uu dabiici yahay.
Ka fogow in aad isticmaasho waxyaabo ay ku jiraan saliid ama dufan oo wajiga la marsado.
Ka fogow sigaar cabista: sigaarku wuxuu cariiriyaa xididada dhiiga siiyo maqaarka, tan waxay keentaa kor qallayl iyo saliid badan.
Waxaa jiro waxyaabo badan oo dabiici ah oo ay dadka qaar sheegaan in ay wax iskaga garteen sida wajiga oo lagu tirtiro ama la mariyo khalka ama dheecaanka tufaaxa, malabka, karootada iyo waxyaabo kale oo badan.
Ku dadaal in aad hesho hurdo kugu filan, tan waa muhiim.
Haddii aad tahay waji ku saliidle, wixii talo ah oo aad wax iskaga garatay waa la wadaagi kartaa akhristayaasheena.
Haaraha Wajiga: Sidee loo baab'iyaa?, AKhriso: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,6318.0.html
Haddii aad su'aalo caafimaad ah qabtid iigu soo dir qeybta su'aalah: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
"Shooga Dhaqanka" Waa Dhibaato Qurbaha Lagu Arko.
Views: 24545 January 17, 2017, 05:34:31 PM
Sidee loo beeraa ubadka maxana looga bahan yahay haweeneyda lagu beerayo?
Started by BilaalBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 47234 December 21, 2009, 07:54:40 PM
Su'aal: Waa maxay astaamaha lagu karto marka jirka ku yartahay birta (Iron)?
Started by HeetiBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 24854 January 16, 2010, 06:58:51 PM
Su'aal: Waa maxay astaamaha lagu garto qofka maka uu ku yaryahay Vitamin C?
Views: 18811 January 16, 2010, 06:58:41 PM
Su'aal: Burushka lagu cadaydo ilkaha dhibaato miyuu u gaysan karaa?
Started by Maxammed Siciid AxmedBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 5695 May 11, 2015, 02:50:20 PM